“Lalao olympika 2020”: tafiditra anatin’ny taranja hifaninanana ny karate | NewsMada
“Lalao olympika 2020”: tafiditra anatin’ny taranja hifaninanana ny karate
Araka ny efa tapaka nandritra ny fihaonambe ny teo anivon’ny COI (Comité olympique internationale), anisany taranja hifaninanana ny karate, amin’ny “Lalao olympika 2020”, hatao any Tokyo.
Raha ny loharanom-baoavao avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenen’ny taranja karate, 80 ny mpikatroka hifanandrina sy hiady ny amboara mandritra ity “Lalao olympika 2020” ity. Mbola hisy ny fifanintsanana isaky ny firenena tsirairay handray anjara, hahafahana misafidy izay ho solontena hanafika any Tokyo. Hizara vondrona roa kosa ireo mpifanandrina rehetra ireo ka hifanandrina amin’ny laharana faharoa amin’ny vondrona B izay mendrika indrindra avy amin’ny vondrona A. Toraka izany ihany koa ny mpikatroka mendrika indrindra amin’ny vondrona B, hifampitana amin’ny laharana faharoa ao amin’ny vondrona A. Izay mivoaka mpandresy amin’ireo, araka izany, no hahazo tapakila hiatrehana ny famaranana.
Miandry ny mpikatroka mandray anjara ny fitsapana miisa valo ho an’ny sokajy “kumite” ary roa kosa ho an’ny “kata”, araka ny fanapahan-kevitra avy amin’ny WKF. Ity farany izay mbola eo an-dalam-panapahana ny rafitra amin’ny fifanintsanana amin’izao fotoana izao.
Anisan’ny taranja hifaninanana ihany koa, araka ny fantatra, ankoatra ny taranja karate, ny baseball, ny escalade, ny surf, ny skateboard ary ny softball. Tsahivina fa ny 24 jolay hatramin’ny 9 aogositra 2020 no hanatanterahana ny “Lalao olympika” any Tokyo.